Arsenal Oo Xiiseyneysa Saxiixa Xidiga Kooxda RB Leipzig Ee Tyler Adams'
HomeWararka Ciyaaraha MaantaArsenal oo xiiseyneysa saxiixa Xidiga Kooxda RB Leipzig ee Tyler Adams’
Arsenal oo xiiseyneysa saxiixa Xidiga Kooxda RB Leipzig ee Tyler Adams’
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso inay heshiis la gaarto ciyaaryahanka khadka dhexe ee RB Leipzig Tyler Adams .
22 jirkaan ayaa wacdaro ka dhigay kooxdiisii ​​Bundesliga intii lagu jiray ololihii 2020-21, isagoo u saftay 37 kulan tartamada oo dhan, isagoo ka qeyb qaatay hal gool iyo hal caawin ah.
Sida laga soo xigtay The Athletic , Arsenal ayaa soo jiidatay qaab ciyaareedka Adams, iyadoo Gunners ay ka fiirsaneyso suurtogalnimada inay u dhaqaaqdo inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Mareykanka ayaa inta badan u ciyaaray sidii qadka dhexe ee daafaca heer kooxeed xilli ciyaareedkii hore laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaalay inuu noqdo qadka dhexe ee garabka midig iyo daafaca midig.
Leipzig waxay ku jirtaa boos adag oo ay kusii heysato Adams, inkasta oo uu qandaraas kula jiro kooxda Jarmalka ilaa dhamaadka ololaha 2024-25.
Xidiga Mareykanka wuxuu 66 kulan u saftay RBL tan iyo markii uu ka yimid New York Red Bulls sanadkii 2019.